Xinxiang Yuanhang သင်ကြားရေးပစ္စည်းကိရိယာ Co. , Ltd မှတင်းကြပ်စွာထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်ကိုထိန်းချုပ်ထားနှင့်ဖောက်သည်များစိတ်ကျေနပ်မှုကိုကုန်ပစ္စည်းအရည်အသွေးပေါ်အာရုံစူးစိုက်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကရေရှည်မှာဖောက်သည်တွေနဲ့အနီးကပ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ပါပဲ။ ဖောက်သည်များအတွက်အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးဝန်ဆောင်မှုပေး, "ငါမကလူရှိပါဘူး, ငါကိုပြောင်းလဲပါရမီရှင်, ပါရမီရှင်လူတွေရှိတယ်" အဆိုပါ "လူ့စီမံခန့်ခွဲမှုသမာဓိရှိဝိညာဉ်ထူးချွန်များ၏လိုက်စား" ကိုလိုက်နာရန်! ကျွန်တော်တို့သည်အတိုင်းမိတျဆှေအနေဖြင့်မိမိတို့၏တန်ဖိုးရှိသောမှတ်ချက်များနှင့်အကြံပြုချက်များမျှော်လင့်အသစ်ကအဟောင်းဖောက်သည်တွေနဲ့လက်၌လက်နှင့်တစ်ဦးပိုမိုကောင်းမွန်မနက်ဖြန်ဖန်တီးကြသည်! , အိမ်မှာနှင့်ပြည်ပအမိန့်ကိုယူစိတ်ကြိုက် drawings နဲ့နမူနာကြိုဆိုပါ၏! ညှိနှိုင်းရန်မေးလျှောက်မှကြိုဆိုပါ၏!
Yuanhang သင်ကြားရေးပစ္စည်းကိရိယာဇီဝချပ်များနှင့်အခြားဓာတ်ခွဲခန်းထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများနှင့်ကိရိယာများထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ရောင်းအား၏လယ်ပြင်တွင်ကြွယ်ဝသောအတွေ့အကြုံကိုစုဆောင်း, နှင့်ခိုင်ခံ့သောနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာတန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိနှင့်ခိုင်ခံ့သောထုတ်ကုန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာစွမ်းရည်ရှိပါတယ်သိရသည်။ ဒါဟာကျယ်ပြန့်ပညာရေး၏အမျိုးမျိုးသောလယ်ကွင်းကပါဝင်ပတ်သက်သည့်ထိုကဲ့သို့သောစသည်တို့ကိုစိုက်ပျိုးရေး, သစ်တော, တိရိစ္ဆာန်ဥယျာဉ်, ဆေးပညာ, သာမန်ကျောင်းတွေ, သိပ္ပံဆိုင်ရာသုတေသနအဖွဲ့အစည်းများအဖြစ်ပိုမိုမြင့်မားသင်ယူမှုနှင့်မူလတန်းနှင့်အလယ်တန်းကျောင်းများအိမ်မှာနှင့်ပြည်ပမှာ, ၏ Institution များအတွက်စမ်းသပ်သင်ကြားမှုရန်လျှောက်ထားသည်။
ကုန်ပစ္စည်း: ဏုနမူနာ, တိရစ္ဆာန်နှင့်အပင်နမူနာ, တိရစ္ဆာန်နှင့်အပင်နမူနာ, အော်ဂဲနစ်ပစ္စည်းကို embedded နမူနာ (ကြည်လင်နမူနာ), မော်ဒယ် (ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစမ်းသပ်သင်ကြားမှုပုံစံ, သင်ကြားမှုပုံစံ), လူ့ရောဂါဗေဒ, တစ်သျှူးဆိုင်ရာဘာသာရပ်နှင့်သန္ဓေဗေဒ, ကပ်ပါး, ဆေးပညာ, ဏု၏နိမိတ်လက္ခဏာ စက်ရုံရောဂါဗေဒ, သတ္တဗေဒနှင့်ရုက္ခဗေဒလူတန်းစားဏုဆလိုက်, ခန္ဓာဗေဒနမူနာ, ခန္ဓာဗေဒနမူနာစီအမှား၏ပလပ်စတစ်နမူနာ, ခန္ဓာဗေဒမော်ဒယ်သွေးကြောသွန်းနမူနာများနှင့်အခြားထုတ်ကုန်များ။
အင်ဂျင်နီယာ: ထဲကဓာတုပစ်စညျးရူပဗေဒဓာတ်ခွဲခန်းများ၏ဆောက်လုပ်ရေး, ကျောင်းဝင်းအသံလွှင့်များ၏ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်မာလ်တီမီဒီယာစာသင်ခန်းများဆောက်လုပ်ရေး။
အဆိုပါ herbarium ပါဝင်သည်: နမူနာစုဆောင်းခြင်းခန်းမ, ဆေးဖက်ဝင်နမူနာစုဆောင်းခြင်းခန်းမ, အရွက်နမူနာစုဆောင်းခြင်းခန်းမ, biorecorve ပြတိုက်, တိရစ္ဆာန်နမူနာပြတိုက်, herbarium, တိရစ္ဆာန်နှင့်အပင်နမူနာစုဆောင်းခြင်းခန်းမ, simulated ဂေဟစနစ်နမူနာပြတိုက်, ဂေဟစနစ်ပန်းခြံ, ဇီဝဥယျာဉ်, herbarium, သမိုင်းအခန်းတစ်ခန်း, ပထဝီအခန်းတစ်ခန်း, etc
Professional ကထုတ်လုပ်မှု: နမူနာ, ရောဂါဗေဒနမူနာ, ရောဂါဗေဒနမူနာ, histological ကဏ္ဍများ, နမူနာ plasticizing, ဇီဝချစ်ပ်, အရိုးနမူနာ, အချပ်ကပ်ပါးကောင်, ပိုးမွှားအချပ်, တရုတ်ဆေးပညာ, စက်ရုံအချပ်, အဏုဆလိုက်, ဏုကဏ္ဍများ, ရောဂါဗေဒနှင့်ရောဂါဗေဒနမူနာ, နမူနာ၏ချပ်, ဇီဝနမူနာ, စက်ရုံရောဂါဗေဒအပိုင်း, စက်ရုံရောဂါဗေဒ, တိရစ္ဆာန်ရောဂါဗေဒ, လူ့ရောဂါဗေဒခန္ကဏ္ဍများကိုဆုံးမဩဝါဒပေးဇီဝဏုဆလိုက်, တိရစ္ဆာန်အပိုင်း, တိရစ္ဆာန်တစ်သျှူးဆိုင်ရာဘာသာရပ်, ကပ်ပါးဝန်, ပိုးမွှားဝန်, ပိုးမွှား smear, တရုတ်ဆေးပညာသင်ကြားမှုအပိုင်း, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပုဒ်မ, စုစုပေါင်းနမူနာ, နမူနာ, နမူနာ, သွန်းနမူနာ, လမိုင်းစက်ရုံနမူနာ, နမူနာ, ခန္ဓာဗေဒနမူနာ, အပိုင်းနမူနာ, အင်းဆက်ပိုးမွှားနမူနာ, တိရစ္ဆာန်နမူနာထိုးဆေးနမူနာ, လိပ်ပြာ, အခြောက်နမူနာ, သန္ဓေသား, နမူနာ, နမူနာ, ဇီဝဗေဒအပိုင်းချွတ်ပြီး, တစ်သျှူးဆိုင်ရာဘာသာရပ်နှင့်သန္ဓေဗေဒအချပ်ဖြတ်ရုက္ခဗေဒ အပိုင်း, ဘဝသမိုင်းနမူနာ, ရုက္ခဗေဒအပိုင်း, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ကပ်ပါးအပိုင်း, ဏုဇီဝဗေဒအပိုင်း, ဇီဝဗေဒနမူနာ, ကပ်ပါးနမူနာ, ဇီဝဗေဒဏု, ဏု, နက္ခတ္တဗေဒမျက်မှန်, မျက်မှန်, နမူနာပုလင်း, Petri ဟင်းလျာများ, beaker နှင့်ဓာတုဖန်။
Xiangyang လမ်းနှင့်တောင်ဘက်စတုရန်းမီတာ 300 မှ Dongming လမ်း, Hongqi ခရိုင်, Xinxiang နန်၏လမ်းဆုံ